HomeWararka DenmarkDenmark oo Xayiraad Cusub soo rogtay Fogaanta Mitirka oo labo laga dhigay
2 weeks ago Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska, Warka ugu akhriska badan 0
Foto Liselotte Sabroe / Ritzau / TT
Dowlada Denmark waxay soo rogtay xayiraad adag si loo xadido faafitaanka Corona. Xayiraadaha ayaa waxaa ka mid ahaa in la dhimo tirada ugu badan ee dadka kulmayo oo laga dhigo 5 halkii laga dhigi lahaa 10, taasoo ay ku jiraan guryaha gaarka loo leeyahay, iyo kordhinta masaafada u dhexeysa dadka ilaa laba mitir halkii laga dhigi lahaa mid. Sida uu shaaciyay SVT.
Xeerarkan cusub ayaa la dhaqan gelin doonaa laga bilaabo berri, Arbaco, illaa iyo 17-ka Janaayo.
“Waxaan hadda sii xajineynaa laba mitir oo dhexdeenna ah, bakhaarrada, kaymaha iyo waddooyinka … Waxaan ku dhiirrigelinaynaa qof walba inuu gurigiisa iska joogo intii suurtagal ah,” ayay ra’iisul wasaare Mette Frederiksen ku sheegtay shir jaraa’id maanta. “Ka shaqee guriga, iskana ilaali inaad waqti la qaadato dadka kale ee aan kuu dhawayn.”
Waxay tilmaamtay in fayraska Ingiriiska uu aad u faafayo, faafitaankiisuna yahay inuu ku xaddidnaado dhan walba.
“Waxaan ku jirnaa xaalad khatar ah runtii,” ayay raacisay. Maku jiri karno faafitaanka intaasi la eg, laakiin waan dib u dhigi karnaa illaa aan ka heleyno waqti aan ku tallaalno dad badan.
Danmark ayaa kaalinta koowaad kaga jirta wadamada Midowga Yurub boqolkiiba inta dadkeeda la tallaalay. “Waxaan tallaalaynaa 100,000 oo qof oo deenish ah maalinti ” ayay tiri Fredrickson. Ilaa inta laga gaarayo, waxaan ka shaqeyn doonaa sidii loo xadidi lahaa faafitaanka cudurka. Waan iska ilaalinaynaa infekshanno badan oo yimaada Danmark